inmnetwork.com - Just another WordPress site
ဂုဏ်ယူပါတယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၅/ မြို့ပြတော်လှန်ရေးအရှိန်မြှင့်မည်သတင်းထွက်ပြီး တပ်အသိုင်းအဝိုင်းက ဒေါ်လာဝယ်စုကုန်ကြ မိမိ၏အိမ်တွင် မပြုလုပ်သင့်သော အချက်(၃၃)ချက် အရမ်းကြီးချွေတာစရာမလိုပဲ အသုံးစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၆)ခု ညီလေး …. ဥကရစ်ထစခန်းသိမ်းပွဲမှာ မင်း ပေးဆပ်ခဲ့တယ် တော်လှန်ရေးနဲ့KNU အတွက် တာဝန်ကျေတာထက် ပိုပါတယ် ညီလေး ရာ စားအုန်းဆီဈေးနှုန်းများ စတင်ကျဆင်းလာ…. မြို့ပြမှာ ပွဲကဖို့ ဆိုင်းသံလေး ပေးလိုက်ကြရအောင် လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို ယနေ့ ဇွန် 28 ရက်မှစကာ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်ကြေညာချက်ပါလမ်းပိုင်းအား ရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်ပါပီ အခုတစ်လော ထိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဂဏန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်း တဲ့ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် အထင်ရှားပေးပြန်ပြီ… ထိုးလို့မရမှာစိုးလို့ (၇ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့အတွက်) ပေးတိုင်းမှန်‌‌နေတဲ့ ထိုင်းက ကိုရင်လေး…
ဂုဏ်ယူပါတယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၅/
မြို့ပြတော်လှန်ရေးအရှိန်မြှင့်မည်သတင်းထွက်ပြီး တပ်အသိုင်းအဝိုင်းက ဒေါ်လာဝယ်စုကုန်ကြ
မိမိ၏အိမ်တွင် မပြုလုပ်သင့်သော အချက်(၃၃)ချက်
အရမ်းကြီးချွေတာစရာမလိုပဲ အသုံးစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၆)ခု
ယနေ့ ဇွန် 28 ရက်မှစကာ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်ကြေညာချက်ပါလမ်းပိုင်းအား ရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်ပါပီ
ဂုဏ်ယူပါတယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၅/ ByD3timesMyanmar ဂုဏ်ယူပါတယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၅/ ပင်ကိုဗီဇအရ အနေအေးပေမယ့်မတရားခံရလို့ ရန်ငြိုးထားမိရင်၁၀ နှစ်ကြာလည်း မမေ့တတ်တာ ၅/ ညီအငယ်ဆုံးကို မျိုးဆက်အတွက်ချန် ကျန်သူအားလုံး လက်နက်ကိုင်ပြီးတော်လှန်နေတာ စစ်ကိုင်းတိုင်း ၅/ ငါ့သား ငါ့သမီး တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့လယ်ရောင်း ယာရောင်း မြေရောင်းစီးတော်ယာဉ်ရောင်း အိမ်ရောင်းအကုန်ရောင်းလို့
မြို့ပြတော်လှန်ရေးအရှိန်မြှင့်မည်သတင်းထွက်ပြီး တပ်အသိုင်းအဝိုင်းက ဒေါ်လာဝယ်စုကုန်ကြ ByD3timesMyanmar မြို့ပြတော်လှန်ရေးအရှိန်မြှင့်မည်သတင်းကြောင့် ဒေါ်လာဈေးတက် စောနွေဦး/People’s Spring ပြည်တွင်းငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်း ဒေါ်လာအဝယ်လိုက်လာပြီး တစ်ဒေါ်လာကို ၂၁၃၀ကျပ်အထိမြင့်တက်လာကြောင်း ငွေလဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများကပြောသည်။ ဈေးကွက်အတွင်း ဒေါ်လာရောင်းချသူနည်းနေသော်လည်း ဝယ်လက်များမှာ ဒေါ်လာငွေသားကို ရသမျှ လိုက်လံဝယ်ယူနေသူများရှိကြောင်းငွေလဲကောင်တာပိုင်ရှင်များထံမှသိရသည်။ “မြို့ပြတော်လှန်ရေး အရှိန်မြင့်ဘာညာပြောနေကြတော့ စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေ ဒေါ်လာလိုက်ဝယ်နေကြတာ။ဒေါ်လာဈေးတက်နေပေ့မယ်လဲ ဝယ်လက်တွေက
မိမိ၏အိမ်တွင် မပြုလုပ်သင့်သော အချက်(၃၃)ချက် ၁ ။ အိမ်ထောင်ဦးစီး လင်ယောကျာ်းအား နိမ့်ကျတဲ့ နေရာတွင် ထားခြင်း။ ၂ ။ မိမိရဲ့ ဇနီးသည်အား ညာဖက်တွင် အိပ်စက်စေခြင်း။ ၃ ။ မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ အမွှေးအမျှင်နှင့် မသန့်ရှင်းသော ပစ္စည်းများ အိမ်အတွင်း စွန့်ပစ်ခြင်း။
အရမ်းကြီးချွေတာစရာမလိုပဲ အသုံးစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၆)ခု ၁။ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို အသေးစိတ် ရေးမှတ်ထားပါ။ ငွေတွေကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုသုံးလိုက်တယ် ဆိုတာကို သိထားရင် ငွေတွေကို အရမ်းမသုံးစေတော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သင်သုံးလိုက်တဲ့ ငွေတွေကို စာအုပ်သို့မဟုတ် app တစ်ခုထဲမှာ ရေးမှတ်ထားပါ။ ထွက်ငွေကို ရေးမှတ်တတ်တဲ့အကျင့်က ငွေ့စုဖြစ်စေဖို့ အရမ်းကို
ညီလေး …. ဥကရစ်ထစခန်းသိမ်းပွဲမှာ မင်း ပေးဆပ်ခဲ့တယ် တော်လှန်ရေးနဲ့KNU အတွက် တာဝန်ကျေတာထက် ပိုပါတယ် ညီလေး ရာ ဥကရစ်ထစခန်းတိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ KNU ကလက်ဖြောင့်စနိုက်ဘာလူငယ်လေးအကြောင်းကို ကိုရဲမင်းက အခုလို ဝမ်းနည်းစွာမျှဝေလာခဲ့ပါတယ် ညီလေး …. ဥကရစ်ထစခန်းသိမ်းပွဲမှာ မင်း ပေးဆပ်ခဲ့တယ် တော်လှန်ရေးနဲ့ KNU
စားအုန်းဆီဈေးနှုန်းများ စတင်ကျဆင်းလာ…. စားအုန်းဆီ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၉၀၀၀ ကျော်မှရှိနေရာမှ ယခုအခါ ဈေးပြန်လည်ကျဆင်းလာကြောင်း စားအုန်းဆီအရောင်းဆိုင်များက သိရသည်။ “ဈေးကတော့ ကျလာပြီ။ ၇၈၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ထိပဲရှိတော့တယ်။ ထပ်ကျဖို့ရှိတယ်”ဟု စားအုန်းဆီအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ ဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ပြောသည်။ ကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီ ထုတ်လုပ်တင်ပို့သည့် နိုင်ငံများ၏ ဈေးကွက်နှင့်ဈေးနှုန်းများ အပေါ်အခြေခံ၍
မြို့ပြမှာ ပွဲကဖို့ ဆိုင်းသံလေး ပေးလိုက်ကြရအောင် လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို မြို့ပြမှာ ပွဲကဖို့ ဆိုင်းသံလေး ပေးလိုက်ကြရအောင် လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို မကြာမီ လာမည်နော် မြို့ပြတော်လှန်ရေးအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့ Fundraising Program ဖြစ်တဲ့ Project NAN HTIKE AUNG လာပါတော့မယ်။
ယနေ့ ဇွန် 28 ရက်မှစကာ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်ကြေညာချက်ပါလမ်းပိုင်းအား ရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်ပါပီ ByD3timesMyanmar မုံရွာ-ယာကြီး-ကလေးဝလမ်းပိုင်းကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်ကြောင်း PDF (၅)ဖွဲ့ပူးပေါင်းထုတ်ပြန် ကျော်ဇော၊ အောင်ဇေယျ /People’s Spring မုံရွာ-ယာကြီး-ကလေးဝလမ်းပိုင်းအား ရက်အကန့်အသန့်မရှိ ယာယီပိတ်လိုက်ကြောင်းချိုမိုင်မိုင် ယင်းမာပင်-ကနီမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနှင့် မဟယမိတ်(၅)ဖွဲ့က ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အဆိုပါလမ်းပိုင်းကို ယမန်နေ့(ဇွန် ၂၈)ရက်ကစပြီးပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းလမ်းပိုင်းတွင်
အခုတစ်လော ထိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဂဏန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်း တဲ့ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် အထင်ရှားပေးပြန်ပြီ… အခုတစ်လော ထိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဂဏန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်း တဲ့ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် အထင်ရှားပေးပြန်ပြီ… အခုတစ်လော ထိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ 2D 3D ပေးတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် သိန်း၁ဝဝတန် ဒိုင်ပြေးနံပတ်
ထိုးလို့မရမှာစိုးလို့ (၇ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့အတွက်) ပေးတိုင်းမှန်‌‌နေတဲ့ ထိုင်းက ကိုရင်လေး…
ထိုးလို့မရမှာစိုးလို့ (၇ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့အတွက်) ပေးတိုင်းမှန်‌‌နေတဲ့ ထိုင်းက ကိုရင်လေး… ထိုးလို့မရမှာစိုးလို့ (၇ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့အတွက်) ပေးတိုင်းမှန်‌‌နေတဲ့ ထိုင်းက ကိုရင်လေး… ဒီအပတ်အတွက် မွေးဂဏာန်းနှစ်ကွက်ပါပြီနော်။ ဒဲ့တစ်ကွက်ကိုပေးလာတယ် ၇ လပိုင်း ၁ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်